Inkcazo yokuThuthukiswa, njengokwenyuka kwabasetyhini
Imbali kunye neNkcubeko Imbali Yabasetyhini
Imbali Yabafazi Ibali
Inkcazo ye "suffrage"
"Ukuxhatshazwa" kusetyenziswa namhlanje ukuthetha ilungelo lokuvota ukhetho, ngamanye amaxesha kuquka nelungelo lokuqhuba kwaye ubambe i-ofisi yoluntu ekhethiweyo. Ngokuqhelekileyo isetyenziswe kwiibinzana ezinjengeli "bhinqa" okanye "i-women suffrage" okanye "i-universal suffrage".
UkuNyuka kunye neMbali
Igama elithi "suffrage" livela kwisiLatini suffragium esithetha "ukuxhasa." Kwakuvele kunomxholo wokuvota kwiklasi yaseKlasini, kwaye isenokuba isetyenzisiwe kunye nethebhulethi ekhethekileyo apho enye ibhalwa ivoti.
Kusenokwenzeka ukuba yafika ngesiNgesi ngeFrench. NgesiNgesi ephakathi, igama lithatha iinjongo zebandla, kunye nokuthandaza. Ngeli-14 nele-15 leminyaka ngesiNgesi, kwasetyenziswa kwakhona ukuthetha "inkxaso."
Ngekhulu le-16 nele-17, i-"suffrage" yayisetyenziswa ngokuqhelekileyo ngesiNgesi ukuba ithetha ukuvota ngenxa yesiphakamiso (njengommeli omele iPalamente) okanye umntu okhethweni. Injongo yandiswa ukuba ifake kwivoti okanye ngokuchasene nabaviwa kunye neziphakamiso. Emva koko intsingiselo ekhulisiwe ithetha ukukwazi ukuvota ngabantu ngabanye okanye ngamaqela.
Kwi-Blackstone yokuchazwa kwemithetho yesiNgesi (1765), uquka inkcazelo: "Kuzo zonke iidemokhrasi ... kukubaluleke kakhulu ukulawula ukuba ngubani, kwaye ngaluphi na uhlobo, kufuneka anikwe."
Ukukhanyiselwa, ngokugxininisa ngokulingana kwabo bonke abantu kunye "nemvume yolawulo," yatshintshela indlela yokuba imbono yokuba amandla, okanye ukuvota, kufuneka ilandiswe ngaphaya kweqela elincinane elincinane.
Omkhulu, okanye kwindalo yonke, yaba yinto efunwayo. "Akukho rhafu ngaphandle kokumela" kuthiwa abo bahlawuliswe ukuba bakwazi ukuvota abameli babo.
I-Universal man's suffrage yayinxeba kwizombusazwe eYurophu naseMelika ngekota yokuqala ye-19 leminyaka, kwaye emva koko (yabona iNgqungquthela yamaLungelo eNkosi yaseSeneca Falls ) yaqala ukunyusa ukuba imfuno yabasetyhini kunye nomfazi wenyuka waba ngundoqo kuphuma ngowe-1920 .
I-suffrage esebenzayo ibhekisela kwilungelo lokuvota. Ibinzana elithi passive suffrage lisetyenziselwa ukubhekisela kwilungelo lokuqhuba kwaye libambe iofisi kawonkewonke. Abasetyhini bekunjalo, kwiimeko ezimbalwa, banyulwa kwi-ofisi ye-public (okanye baqeshwe) ngaphambi kokuba banqobe ilungelo lokusebenza.
Isibandezelo sasisetyenziselwa ukuchaza umntu osebenzela ukunyusa amaqela amasha. Ngezinye izihlandlo i- Suffragette isetyenziselwa abafazi abasebenzela ibhinqa .
Ukubizwa: I- SUF-rij (mfutshane u)
Kwaziwa nangokuthi: ivoti, i-franchise
Eminye i-Spellings: i- souffrage, i-sofrage kwiNgesi yesiNgesi; iimbandezelo, zanele
Umzekelo: "Ngaba ngaba iifesi zaseNew York kufuneka zibekwe kwinqanaba lokulingana nabesilisa ngaphambi komthetho? Ukuba kunjalo, masikucela ukuba kubekho okusesikweni kubasetyhini. abesilisa, ngaba nelizwi ekumiseni abenzi bomthetho kunye nabalawuli bomthetho? Ukuba kunjalo, masikucele ukuba uMfazi unelungelo lokuxhatshazwa. " - Frederick Douglass , 1853
Igama elithi "i-franchise" okanye ibinzana elithi "ukuthengiswa kwemali yezopolitiko" isetyenziselwa ukuvota kunye nelungelo lokuqhuba iofisi.
Ukulahla amalungelo okuxhatshazwa
Ubumi kunye nokuhlala kuhlala kuthethwa ngokukhetha ukuba ngubani onelungelo lokuvota kwilizwe okanye kwilizwe.
Iziqinisekiso zeminyaka yobudala zichanekile ngxabano yokuba abantwana abanako ukusayina izivumelwano.
Kwixesha elidlulileyo, abo bangenalo propati babedla ngokungafanelekile ukuvota. Ekubeni abafazi abatshatileyo bebengakwazi ukusayina iikontrakthi okanye ukulahla impahla yabo, kwakucatshangelwa ukuba kufanelekile ukukhanyela abavotayo.
Amanye amazwe kunye ne-US ayibandakanyi ukuxhomekeka kwabo bafunyaniswe inetyala, ngeemeko ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha ilungelo libuyiselwa ekugqityweni kweemeko zentolongo okanye izimo ze-parole, kwaye ngamanye amaxesha ukubuyiselwa kuxhomekeke kulwaphulo-mthetho olungengobundlobongela obundlobongela.
Uhlanga luye lwaba ngqo okanye ngokungathandabuyo isizathu sokukhutshwa kwamalungelo okuvota. (Nangona abafazi bevotelwe eUnited States ngo-1920, abaninzi abantu base-Afrika nabamaMerika babengabandakanywa ekuvoteni ngenxa yemithetho echasene ngokobuhlanga.) Iimvavanyo zokufunda nokubhala kunye neerhafu zesebe ziye zasetyenziselwa ukuba zingabandakanyi kwi-suffrage.
Inkolo kwimibutho yaseUnited States ne-Great Britain ngamanye amaxesha yayiyizathu yokukhutshwa ekuvotweni. AmaKatolika, maxa wambi amaYuda okanye amaQuaker, ayengabandakanywa.
"[T] apha akuyi kuze kubekho ukulingana okuze kubekho oomama ngokwabo bancedisa ukwenza imithetho nokonyula abameli." - USusan B. Anthony
"Kutheni umfazi emele aphathwe ngokwahlukileyo? Umfazi oza kuphumelela uya kuphumelela, nxamnye nokuchaswa kwe-guerilla embi. "- UVictoria Woodhull
"Yiba nomkhosi ngendlela yakho!" Abaya kuni abangakwazi ukuphula iifestile, bawaphule. ukudibana nokuvukela. Ndilandele ukuba unqabile! " - Emmeline Pankhurst
Iingcaphuno ezi-6 ezivela 'Ukukhululwa Kwesifazane njengesiSeko seNguqulelo yeNtlalo'
Ziziphi amalungelo Amakhosikazi?
Yintoni Ubulili? Ukuchaza iNkqantokazi eqhoshayo yoLuntu
Abbesses kwiNkcubeko yeNkokheli yabaseTyhini
I Ninja yaseJapan
Izinto Ezi-9 NgeCetzalcoatl
Indlela yokudibanisa iNgqungquthela engafanelekanga yesiLatini "Ukuba"
I-Yamas Ten - Izibambiso okanye ukuziphatha kakuhle kwi-Hindu
Isicwangciso kunye namaqhinga eminyaka eyiMinyaka yeMfazwe
Iinqununu zaseNorway Heavy Metal Bands
Iinkqubo zeKlasi kunye neeRoutines
Ukuqala Izifundo zeDisboardboard Diving
Imibuzo yesiNgesi yabafundi
Ileta yeSibheno seNkcazo yokuLawulwa kweKholeji
UBlake Shelton: I-Biography
Iphulo Intshiseko kuzo zonke iintliziyo zePatriot IiNtsuku zeSuku samaVeter
Umlinganiselo we-Mike Tyson (Icandelo 1 kwe-5)